MRB Otomatiki vanhu pakaunda sensor HPC005S (yakananga-kurodha vhezheni)
Kusiyana neiyo HPC005, HPC005S otomatiki vanhu kaunda inogona kuendesa data kune gore isina PC.
Iyi isina waya otomatiki vanhu kaunda iyo inogona kutapurirana isina WIFI, Mazhinji edu otomatiki vanhu kaunda zviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yeduotomatiki vanhu kaunda.
Munguva ye data hombe, Otomatiki vanhu pakaunda inoita kuti data rinyatsoita uye rinoita kuti bhizinesi rive nyore. Automatic vanhu vanopokana yakakodzera mumaraibhurari, zviteshi zvechitima zvinomhanya kwazvo, zvitoro zvine nharembozha, misika yetarenda, dzimba dzemabhizimusi ekufona, mahofisi ehurumende, masupamaketi, ngetani dzezvipfeko, Munhandare huru dzendege, mamuseum nemasaizi uye nedzimwe nzvimbo, kusiyana neya otomatiki vanhu kaunda, iyo otomatiki vanhu kaundayeMRB inongova hafu saizi yekadhi rechikwereti. Zviri nyore kwazvo kumisikidza, mbiri-nzira kuverenga, zvine hungwaru kusiyanisa iko kwekupinda kwevashandi nekubuda, uye kumisikidza hakudi chero wiring. Iyo yekupedzisira yekuona musuwo ndeye 40 metres yakafara, isina waya data kufambisa, uye iyo isina waya yekufambisa daro yakareba yakareba kupfuura iyo yeasina waya router.Otomatiki vanhu pakaunda inoshandisa lithium-ion mabhatiri emagetsi, ayo anogona kugara kweanenge makore maviri, ayo akasiyana zvakare otomatiki vanhu kaunda.
Chigadzirwa chakanakira MRB otomatiki vanhu pakaunda
1. Dhizaini ye otomatiki vanhu kaundayakapusa uye ine rupo. Chitarisiko dhizaini yekambani nyowani yakapfupika, kumisikidza kumisikidza, kutsigira kunama.
2. Hupenyu hwakareba hwebhatiri, otomatiki vanhu kaunda Hupenyu hwebhatiri hunogona kusvika gore nehafu, 3.6V yakakura-inokwana lithiamu bhatiri, voltage 1.5-3.6V, uchishandisa AA (Nha. 5), zviri nani kuchinjika.
3. Wedzera LCD kuratidza pane otomatiki vanhu kaunda, iyo data mukati nekunze yakajeka pakatarisa, uye iwe unogona kuona zvakajeka.
4. Kuendesa dhata kwe otomatiki vanhu kaundaakatsiga. Iyo data inopfuudzwa kubva kune yevatakuri inoyerera inopesana neyekugamuchira dhata iri rese rakavharwa data, risingapindire kune mamwe majaira uye rakachengeteka.
5. Dzivirira kupindira kwechiedza kune otomatiki vanhu kaunda zvinobudirira, uye gadzirisa iyo yekuverenga yekukanganisa inokonzerwa neshanduko yemwenje mwenje.
6. Real-nguva kuburitsa dhata kuburikidza neiyo LED kushambadzira skrini pane yedu otomatiki vanhu kaunda, uye iyo data data inogona kuratidzwa kune iyo LED yekushambadzira skrini kuburikidza neprotocol uchishandisa software yekutarisa-chaiyo-nguva yekutarisa.
7. MRB Otomatiki vanhu pakaunda Inogona kupinda mukati megirazi kuti ishande zvakajairika pasina kuvhiringidzwa kubva pagirazi mikova nemahwindo.
8. Kamwe iyo inouya infrared mwaranzi yeiyo Otomatiki vanhu pakaunda yakavharirwa nevanhu kana zvinhu kweanopfuura masekondi mashanu, kuratidzwa kucharatidza maitiro akavharika, uye mwenje weLED uri pakati peRX uchapenya kuratidza kuti pane chinovhiringidza, uye data richaziviswa kune anogamuchira data. Iko kuchave zvakare kune zvakabatana zvinyorwa uye matipi mune software yeiyootomatiki vanhu kaunda.
9. Gutsikana zvakasiyana siyana zvakagadziriswa zvinodiwa, mutengi weLOGO anogona kuwedzerwa kune iyo otomatiki vanhu kaunda muviri kana chipo bhokisi.
10. MRB otomatiki vanhu kaunda yakafara nzvimbo: inosvika 1-40 metres kure kure kumisikidzwa.
11. Izvi otomatiki vanhu kaunda inogona kushandiswa kune Yekugara kudzora kuburikidza nesoftware.
General otomatiki vanhu kaunda
Kuverenga Nzira Straightaway Shot uye Shade uyezve Verenga
Tine mhando dzakawanda dze IR otomatiki vanhu kaunda, 2D, 3D, AI otomatiki vanhu kaunda, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo otomatiki vanhu kaunda zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
HPC005 otomatiki vanhu vanopikisa vhidhiyo
Pashure: MRB ESL chitaridzi system HL750
Zvadaro: MRB Door vanhu vanopokana HPC001